Ọ bụghị naanị ụlọ akwụna, ndị akwụna na ọgwụ ọjọọ .Amsterdam bụkwa obodo kachasị ike n'ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ọ bụghị naanị ụlọ akwụna, ndị akwụna na ọgwụ ọjọọ .Amsterdam bụkwa obodo kachasị ike n'ụwa
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Entertainment • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • LGBTQ • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Amsterdam kpuchiri obodo kachasị ike n'ụwa
Ọ bụghị naanị ụlọ akwụna, ndị akwụna na ọgwụ iwu - Amsterdam bụkwa obodo kachasị ike n'ụwa nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ kachasị elu na -agbagharị iji rụọ ọrụ, yana ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na -akwado mgbatị ahụ.
Ịnọ na -arụsi ọrụ ike abụghị ọrụ dị mfe maka ndị bi n'obodo.
Dị ka WHO si kwuo, ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị bi n'ụwa anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Ihe omumu ohuru nke Reebok kpughere na Amsterdam bụ ebe ndị kacha nwee ahụ ike nọ.
Dị mkpa maka ahụike uche na nke anụ ahụ anyị, ekpughere mmega ahụ ugbu a dị ka isi ihe maka ịlụ ọgụ megide COVID-19. Otu nnyocha ndị America mere n'oge na -adịbeghị anya tụrụ aro na enweghị mmega ahụ nwere ike karịa okpukpu abụọ nke ịnwụ site na coronavirus.
Oge ịgba ọsọ ịgba ịnyịnya Amsterdam
Agbanyeghị, maka ndị bi n'obodo ukwu na ibi ndụ ha anaghị anọ nkịtị, ịnọ n'ọrụ anaghị abụkarị ọrụ dị mfe. Dị ka Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị okenye nọ n'ụwa anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Ọmụmụ ihe ọmụmụ na nso nso a Reebok enyochala ihe karịrị obodo iri isii n'ofe ụwa iji kpughee obodo kacha arụ ọrụ n'ụwa.
Ọmụmụ ihe a dabere n'ọtụtụ ụdị ahụ ike na metrik dabere na ahụike dịka ọkwa nke arụ ọrụ anụ ahụ ezughi oke, pasent nke ndị otu mgbatị ahụ, pasent nke iji igwe kwụ otu ebe na ihe metrik gburugburu.
N'ụwa niile, 28% nke ndị okenye gbara afọ 18 gbagowe anaghị arụ ọrụ nke ọma na 2016. Dị ka nkọwa WHO si kwuo nke a pụtara na ha anaghị eme “opekata mpe nkeji iri ise na ise, ma ọ bụ nkeji iri ise na ise siri ike kwa izu”.
Ọnọdụ a na-emetụta mba ndị nwere nnukwu ego n'ihi oke ọrụ tebụl, mana imega ahụ apụtaghị itinye nnukwu oge na mgbatị ahụ.
Agbanyeghị, ụfọdụ obodo na -erite uru na ọnọdụ dabara adaba maka ahụike karịa ndị ọzọ, n'ihi ezigbo ikuku dị mma, ọnụ ọgụgụ dị elu nke oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mgbatị ahụ dị ọnụ ala.
Lelee anya na ndepụta obodo iri abụọ kachasị mma n'okpuru:
Cities mba Oke oke oke (ọkwa obodo) Ọnụ nke ndị otu mgbatị ahụ kwa ọnwa Ndị mmadụ na -agba ịnyịnya ígwè arụ ọrụ Ọkwa nke mmega ahụ ezughị ezu (mba) Pasent nke oghere oghere ọha % nke ndị obodo na -aga mgbatị ahụ
1 Amsterdam Mba netherland 20.40% € 41.87 45.90% 27.2 13.00% 17.40%
Paul na NY ekwu, sị:
September 20, 2021 na 04: 17
Enweghị agha na ọgwụ ọjọọ na ọ nweghị agha maka Israel na -enyere ahụike obodo na ahụike uche aka.